In ka badan 80 tahriibayaal ah oo ku dhintay badda Lampedusa - BBC News Somali
In ka badan 80 tahriibayaal ah oo ku dhintay badda Lampedusa
Image caption Tahriibayaasha Lampedusa
Badhasaabka jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 82 qof meydkoodii laga soo saaray badda, ka dib markii ay halligantay dooni ay saarnaayeen ilaa 500 oo qof oo ah tahriibayaal Afrikaan ah, oo Soomaaliyi ay ka mid yihiin.
Waana tiro ka badan boqol qof toddobaadkan gudhiisa oo qudha tahriibayaasha ku dhintatay baddaasi meditrraneanka, kuwaasi oo ka yimid Afrika, kuna talo jirey inay soo galaan dalalkani Yurubta Galbeed. Dadka halkaasi ku dhintay sida wararku ay sheegeen waxa ka mid ahaa dumar uur leh iyo caruur.
Ra'issalwasaaraha dalka Talyaanigu waxa uu ku tilmaamay shilkani mid aad u xun oo argagax leh, welina waxa socda baadhitaankii meydadka dadkaasi badda ku halligmey.
Markabka ay la socdeen dhawrkan boqol ee tahriibayaasha ahi waxa uu degey ka dib markii uu dab qabsaday, isaga oo maraya meel u dhaw xeebta Lampedusa, sida ay sheegeen dad goojoogayaal ah oo ka mid ah dadkii nolosha lagu soo badbaadiyey ee Markabkaasi saarnaa.
Jasiiradda Lampedusa oo u dhaxaysa Talyaaniga iyo dalka Tunisia waxay ka mid tahay marinnada ugu waaweyn ee tahriibayaashu ay ka soo galaan qaaraddani Yurubta Galbeed.